20% Discount For All Food Menu
20% Discount For All Food Menu အသေးစိတ်
အစားအသောက်ဆိုရင် ကောင်းမှကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ သူတွေအတွက် သာမက တိုင်းရင်းသား အစားစားဖြစ်တဲ့ ထူးထူးခြားခြား မြိတ်ရိုးရာ အစားအသောက်တွေ ရရှိနိုင်တဲ့ Golden Cuisine
ဒီလိုဆိုင်မျိုး မှာ B&F Weekly Promotions ရဲ့ Mobile App နဲ့သွားရောက်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ 20% For All Food Menu ရရှိမှာဆိုတော့က ဘာတွေဝေနေအုန်းမှာတုန်း… ?
ဒီဆိုင်လေးကတော့ မိုကောင်းလမ်း ၊ ရန်ကင်းမြို့မှာ တည်ရှိပြီးတော့ တရုတ်အစားစား၊ ထိုင်းအစားစားနဲ့ ဒေသထွက် မြိတ်ရိုးရာ တမူထူးခြားပြီး အစားအသောက်ကောင်းတွေ ဆုံစည်းရာ ရှားရှားပါးပါးဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ပါ.…
ဒီဆိုင်လေးရောက်ရင် ဘာတွေမြည်းစမ်း စားသောက်ကြမလဲ?
ပုံမှန်စားနေကျ အစားအသောက်တွေ ထဲကနေကွဲထွက်တဲ့ မြိတ်ကနေ တိုက်ရိုက်တင်သွင်းထားတဲ့ သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်တဲ့ ပင်လယ်စာတွေ အသီးရွက်တွေနဲ့ ပူပူနွေး ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ အစားသောက်တွေကို စားသောက်ကြမယ်…
Golden Cuisine မှာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ အကြိုက်တွေ့စေမဲ့ အစားအသောက်တစ်ချို့ကတော့ ကြက်ကောင်ညှင်း ၊ ငါးဖက်ထုပ်ပေါင်း၊ ကင်းမွန် ကောက်ညှင်းသိပ်၊ ဂဏန်းကော်ရည် ၊ တညင်ရွက်ကြက်ဥ အဲဒီ Menu တွေကတော့ ဈေးလည်းအသင့်တင့်နဲ့ တော်တော်များများ အကြိုက်တွေတဲ့ အစားသောက်တွေပါပဲ..
ခြုံပြောရရင် ဒီဆိုင်က အစားသောက်တွေဟာ ပုံမှန် စားနေကျအစားသောက်တွေနဲ့ ကွဲထွက်နေမှာ ဖြစ်ပြီး အရသာဟာထူခြားကောင်းမွန်တာမို့ တစ်ခါတစ်ခေါ်က်လောက်တော့ သွားရောက် စားသုံးသင့်တဲ့ ဆိုင်ကောင်းတစ်ခုပါ…
Golden Cuisine Chinese Restaurant လိပ်စာလေးကတော့
Address - No.47, Moe Kaung Road, 14 Ward, Yankin Township, Yangon
Phone No - 0941004911, 09750104465
All Menu 20% Discount For Food Menu ကို ရယူလိုတယ်ဆိုရင်တော့ B&F Weekly Promotions Mobile App ရဲ့ စာမျက်နှာက Use Now ဆိုတဲ့ ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပြီး ကျလာတဲ့ Box လေးမှာ ဖုန်းနံပါတ်လေး ထည့်သွင်းပြီး ကျလာတဲ့ Success စာမျက်နှာကို Bill မရှင်းမီ ပြလိုက်ရုံနဲ့တင် Promotions ကြီးကို ခံစားနိုင်မှာပါ။
Mobile App အသုံးပြုပုံနဲ့ပက်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အခက်ခဲတစ်စုံတစ်ရာရှိပါက B&F Weekly Promotions Head Office 09-969910128, 09-969910115 တို့ကို ရုံးချိန်အတွင်းဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Promotions Period - 19.Aug.2019 - 20. Feb. 2020